Soomaaliya oo shir caalami ah uga qeybgalaysa Norway – Kalfadhi
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa uga qeyb galaya magaalada Oslo ee dalka Norway shir caalami ah oo looga hadlayo Soomaaliya.
Waxaa la socda Xasan Cali Kheyre wafdi uu kamid yahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo qoraal dhigay bogga rasmiga ah ee uu ku leeyahay Facebook-ga ayaa ku sheegay inay u baxeen safar shaqo oo ku aadan sidii ay adduunka uga soo dhaadhicin lahaayeen isbadalka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudadii ay jirtay xukuumadda uu horkacayo Kheyre.
Soomaaliya waxaa lagu ammaanay dhinacyadda maaliyadda oo ay horumar ka sameysay sannadihii danbe, waxaana ay hadda dooneysa inay soo daabacdo lacag cusub.
Shirka Oslo Forum waxaa ka qeybgalaya dalal badan oo daneeya siyaasadda Soomaaliya, waxaana la filayaa in xoogga lagu saaro xaaladaha dhaqaale iyo amni ee dalka.
Xildhibaan hore oo shaki weyn geliyay heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya